कालिमाटीमा यु’वतीले भेट्न बोलाएपछि खुसि हुँदै पुगे हेमराज तर झन्डै म’रे’नन् !:: Mero Desh
कालिमाटीमा यु’वतीले भेट्न बोलाएपछि खुसि हुँदै पुगे हेमराज तर झन्डै म’रे’नन् !
Published on: २ आश्विन २०७८, शनिबार ०९:१२
यु’वती प्र’योग गरेर कालिमाटीमा बोलाएर हेमराज शाहीलाई खु’कुरी हा’नेको घ’ट’नामा प्रहरीले ४ जनालाई प’क्रा’उ गरी सार्वजनिक गरेको छ ।यस घ’ट’नामा संलग्न ३ यु’वतीलाई प्रहरीले यस अघि नै प’क्रा’उ गरिसकेको छ ।यु’वतीले फेसवुकमार्फत चिजजान गरेर बाँके नेपालगन्ज
घर भएका हेमराज शाहीलाई कालिमाटी स्थित आफ्नो कोठामा बोलाएकी थिइन् ।योजना अनुसार कोठामा ५ जना केटा पनि बसेका थिए । जब हेमराज आए उनीहरुले खु’कु’री हा’ने । अहिले हेमराजको ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ ।यो घ’ट’ना भदौ १८ गते भएको हो । भदौ १८ मा दिउँसो साढे २ बजे तरकारी बजार
पछाडिको क्लब गल्लीमा घ’ट’ना भएको हो ।घ’ट’ना भएको ११ दिनपछि प्रहरीले अभिमानसिंह बस्नेतलाई प’क्रा’उ गरेको छ । बुधवार राति सीतापाइलाबाट प’क्रा’उ गरिएका उनलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ ।उनी गुण्डा ना’इके समिरमानसिंह बस्नेतका भतिजा हुन् । २०७४ असोजमा नयाँ बानेश्वरमा निर्माण ब्यवसायी महासंघका
तत्कालीन अध्यक्ष शरद गौचन मा थि घ’ट’ना गराएका समिरमान अहिले थुनामाछन् । भदौ २१ मा प’क्राउ परेका युवतीलाई कार’वाही प्रकृया सुरु भइसकेको छ ।’पक्रा’उ पर्नेमा मनु लामा र सानिया लामासहित ३ जना छन् । हेमराजलाई बोलाएर त्यसो गर्नुको पछाडीको कारण पनि छुट्टै छ । घ’टना’ नेपालगन्जसंग जोडिएको छ ।
नेपालगन्जमा ड्र’ ग्सको काम गर्ने जेन शाहको समूहलाई हेमराजले नेपालगञ्जमा खु’कु’ री हानेको थियो ।त्यो घ’ट’ना पछि हेमराज का ठमाडौ आएर बसेका थिए ।जेन शाहले हेमराजको खोजी जारी राखेका थिए ।त्यसकालागि सिन्धुपाल्चोकका सोमन श्रेष्ठ उर्फ च्याँखेलाई योजनामा सहभागी बनाए ।
ललितपुरको ग्वार्को र टीकाथलीमा फ्ल्याट लिई ३ जना युवतीलाई राखेर उनीहरुले हेमराजलाई समाजिक सञ्जा लमार्फत सम्पर्क बढाए । जब युवतीले फेसवुक मार्फत हेमराजलाई भेट्न बोलाइन् उनी युवतीको कोठामा गएको बेला घ’ट’ना भएको हो ।